China Ihe asatọ akụrụngwa nchedo kemịkalụ na ndetu zuru ezu ndị nrụpụta na ndị na-ebu ngwaahịa | Joysun
Gbado ọkụ akpụkpọ anụ
Ọkwọ ụgbọala Akpụkpọ anụ
Akpụkpọ anụ Nkwụ ጓ
Uwe akpụkpọ anụ oyi
Eriri kpara Gloves
Uwe mkpuchi Latex
Anụ na-ekpuchi Nitrile
PVC Ejiri mkpuchi
Asatọ ihe nke chemical nchedo uwe na ndetu na zuru ezu
Ihe ndị ụlọ ọrụ mere
Chemical echebe uwe
Ọ bụ akụkụ dị oke mkpa nke mmepụta kemịkal ma nwee ike ichedo ahụike nke ndị ọrụ. Ọtụtụ ndị mmadụ maara ogwe aka nchekwa kemịkal, mana ha amachaghị banyere ya. Nke a bụ ụdị asatọ nke ihe nchebe kemịkalụ, yana nkọwa dị mkpirikpi nke uche ha metụtara ya.
Nke mbu: natural latex
N'ikwu okwu n'ozuzu, latex okike nwere nchebe ka mma maka ngwọta mmiri, dị ka acid na alkaline aqueous solutions. Uru ya bụ nkasi obi, ịdị mma dị mma na ojiji na-agbanwe agbanwe.
Kinddị nke abụọ: Nitrile
Ọ nwere ezigbo ihe nchebe na-egbochi mmanụ, griiz, ngwaahịa petrochemical, ndị na-ete mmanụ na ihe mgbaze dị iche iche. Otú ọ dị, ọzịza nwere ike ime na ụfọdụ ihe mgbaze, na-emetụta ihe onwunwe ya ma belata nchedo.
Typedị nke atọ: polyvinyl chloride (PVC)
Ọ nwere mmetụta nchekwa na ọtụtụ mmiri ọgwụ ndị nwere ike ịnwụ mmiri, dị ka asịd na alkalis, mana ọ nweghị ike ichebe ihe ndị dị ndụ dị ka ihe mgbaze, n'ihi na ọtụtụ ihe mgbaze ga-agbaze plasticizer dị na ya, nke na-agaghị eme naanị mmetọ. na-emekwa ka ọrụ mgbochi nke gloves belata.
Nke anọ: Neoprene:
Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ntụsara ahụ dịka rọba eke. Ọ nwere ezigbo nchebe maka ngwaahịa na ndị na-ete mmanụ, ọ nwere ike iguzogide ụzarị ọkụ na ọkụ ọkụ, yana nwekwara oke ọgwụ ịka nká.
Nke ise: mmanya polyvinyl:
O nwere ezigbo ihe nchebe na ọtụtụ ihe ndị na-edozi ahụ, mana ọ na-adị mfe soluble na mmiri, na ịdị irè ya ga-ebelata mgbe ị zutere mmiri, na ihe ahụ siri ike na enweghị nhịahụ ịhazi.
Nke isii: butyl synthetic roba
Ọ nwere ezigbo ihe nchebe na-egbochi ihe ndị e kere eke na acid siri ike. O siri ike ịmepụta na nhazi. Ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara inwe mmetụta nchebe na mmanụ na abụba, mana ọ nwere ezigbo ihe nchebe dị na gas.
Nke asaa: Fluorine roba
Fluorinated polymer, mkpụrụ ahụ yiri Teflon (polytetrafluoroethylene), yana ike ọrụ ya dị ala, yabụ ụmụ irighiri mmiri agaghị anọ n’elu ala, nke nwere ike igbochi ịbanye kemịkal. Ọ bara ezigbo uru maka ihe nwere ihe na-emepụta chlorine na hydrocarbons aromatic. Ezi nchedo mmetụta.
Nke asatọ: Chlorosulfonated polyethylene:
O nwere ihe nchebe maka ihe ka ọtụtụ na mmiri ọgwụ, nwere ike ichedo alkalis, mmanụ, mmanụ na ọtụtụ ihe mgbaze, ma nwee ezigbo nguzogide ogo na obere okpomọkụ, na-eyi nguzogide, na-ehulata nguzogide na ihe ndị ọzọ.
Ndị a na-ejikarị eme ihe bụ latex, butyronitrile, na polyvinyl chloride (PVC) maka ịkwanye uwe aka.
Post oge: Jul-06-2020
Nkeji 10Q, Gangwan Chuangye Bldg, No.1041, Houhai Blvd, Nanshan Dist. Shenzhen, China.
N'ihi na jụrụ ase banyere anyị na ngwaahịa ma ọ bụ pricelist, biko hapụ anyị na anyị ga-enwe na aka n'ime 24 awa.